Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Gas > 100W N&#39;ọdụ ụgbọ mmiri a na-agbanye n&#39;ọdụ ụgbọ mmiri
Bbier 100w Na- agbanye ya na-enye ìhè bụ UL ETL CE ROHS certificated. Mmiri a na- eduzi 100w nke a na- eji ogo 3030 ibe, akụkọ LM-80 na data IES dị, 120mm / W maka ikpu ọkụ ọkụ gas a. .. Igwe ọkụ mmanụ ụgbọ ala na mkpuchi ntụ ntụ na-enwu gbaa, na-enweghị ụda na corrosion; A na-ewu ebe a na- emepụta ikuku ọkụ ọkụ -na modul modul, nkwụsị dị mfe, ụgwọ ọrụ dị ala. A na-eji ọkụ eletrik anyị na-eji ọkụ ọkụ eme ihe n'ile ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụkụ, ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ gas, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ụlọ ndị na-echere, ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ mmiri, ikuku na ọkụ ọkụ ndị ọzọ.
Ogwe Ubi Elu Ubi Elu nke Ugwu 60W nke Ugwu Kpọtụrụ ugbu a
60W Egwuregwu Ngwá Agha nke Ọma 7200LM 5000K Kpọtụrụ ugbu a
100W Ikuku Ngwongwo nke Gas Gas 100W Kpọtụrụ ugbu a